31 लागि परिणाम iron man
avengers र ultron को फलाम मानिस वृद्धि
Ultron फिर्ता छ र उसलाई पराजित गर्न सम्म छ। फलाम मानिसको रूपमा प्ले र चाँडै खेल पिटे र दिन सुरक्षित गर्न Ultron गरेको मिसाइलहरु चकमा! शेयर Avengers अनि आफ्नो मित्र लागि Ultron खेल फलाम मानिसको उदय र प्राप्त मजा
फलाम मानिस तारा युद्ध
फलाम मानिस उहाँले स्पेस मा उड गोली प्रेस अन्तरिक्ष पल्ट द्वारा अवरोध नगर्न प्रयोग माउस तिनीहरूलाई गोली सबै शत्रु extirpate छ जहाँ मंगल, मा एक मिशन छ। अर्को स्तर अनलक गर्न प्रमुख सङ्कलन। थप स्कोर प्राप्त गर्न तारा सङ्कलन।
ग्यालेक्सी को फलाम मानिस संरक्षक
ग्यालेक्सी अपरिचित आक्रमण गरिएको छ। फलाम मानिस शत्रु को आक्रमण बिरुद्ध Avengers द्वारा tasked थियो। उहाँलाई यो मिशन पूरा सहयोग गर्नुहोस्।
फलाम मानिस अन्धकारमा वन हराएको
विश्व परदेशी द्वारा धम्की छ। यो Avengers पृथ्वी सुरक्षित गर्न परदेशी नष्ट गर्न फलाम मानिस पठायो। कृपया उसलाई ती विशेष सीप प्रयोग गर्न मदत।
फलाम मानिस लडाई
फलाम मानिस लडाई! रमाइलो गर्नुस !
रोबोट्स को फलाम मानिस आक्रमण
को न्यूयोर्क शहर कब्जा गर्न पृथ्वीमा पठाइएको अर्को ग्रह देखि रोबोट्स, avengers फलाम मानिस रोबोट्स नष्ट गर्न नियुक्त गरिएको थियो। कृपया मद्दत फलाम मानिस खेल को सबै स्तर पारित गरेर avengers को यो मिसन पूरा गर्नुहोस्।
ड्रागन को मास्टर ironman
धरती अर्को ग्रह देखि परदेशी द्वारा आक्रमण भएको छ। यो Avengers आफ्नो आक्रमण विरुद्ध Ironman चाहन्छु। गरेको उहाँको सबै परदेशी सबै स्तर नष्ट र पारित गर्न आफ्नो हतियार प्रयोग मदत गरौं।
फलाम मानिस3खेल
सहायता टोनी बिल्कुलै उर्फ ​​फलाम मानिस शहर मार्फत उड गर्न र यसलाई आक्रमण बचत गर्न। शत्रु वाहन, हेलिकप्टर र प्लेन नष्ट र आफै बच्न प्रयास गर्नुहोस्। गोली प्रेस LMB। तपाईं एक ठूलो साहसिक लागि तयार हुनुहुन्छ? पुनश्च कोड आर प्रविष्ट गर्नुहोस्
ironman मार्स अन्वेषण
Ironman नयाँ ऊर्जा स्रोतहरु फेला पार्न मंगल गर्न Avengers देखि मिशन प्राप्त। त्यहाँ धेरै परदेशी र राक्षस हो, तपाईं उहाँलाई पृथ्वीमा सुरक्षित फर्कन कार्य पूरा गर्न मद्दत गर्छ।
फलाम मानिस न्यूयोर्क behemoths
एक दिन, न्यूयोर्क शहर को परदेशी आक्रमण भएको थियो, फलाम मानिसको तिनीहरूलाई प्रकोप बाट शहर बचत गर्न लड्न पर्छ। तपाईं आकाश मा फलाम मानिसको गोली मार वस्तुहरु सार्न माउस प्रयोग गर्नुहोस्।
फलाम मानिस कठिन लक्ष्य
मदत फलाम मानिस आफ्नो स्क्रिनमा सबै लक्ष्य गोली। यो खेल को सबै स्कोर र स्तर प्राप्त गर्नुहोस्।
फलाम मानिस ठाउँ युद्ध
धरती Ironman गाढा सेना र शत्रु आक्रमण बिरुद्ध Avengers द्वारा धम्की छ। तपाईं Ironman, स्पेसबार बी रकेट आगो गर्न, लेजर कुञ्जीहरू गोली एन बटन, आक्रमण गर्न नियन्त्रण गर्न बाँण कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस्।
फलाम मानिस त जाने जाने
उडान, ऊर्जा तोप जारी ऊर्जा फलाम मानिस कमजोर बनाउनेछ को फलाम man.Lack ऊर्जा खपत हुनेछ, तर फलाम मानिस द्वारा ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ इस्पात बक्स वा स्पर्श ऊर्जा साजसज्जा नष्ट। सिक्के, यो SK स्तरवृद्धि गर्न फलाम मानिस को लागि आवश्यक वस्तुहरू छ
फलाम मानिस 3: मिसिन को दङ्गा
युद्ध मिसिन को सेना पराजित! एक उच्च गुणस्तरको पार्कआवर तत्व संग फलाम मानिस एक platformer।
को avengers: झगडा नायक
तपाईं यो चुनौती मा आफ्नो मिशन पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने आश्चर्य नारी, फ्लैश र अरूलाई भेट्न नौकर, फलाम मानिस, स्पाइडर र अरूलाई रूपमा उपलब्ध विकल्पहरू आफ्नो मनपर्ने सुपर हिरो चयन गर्नुहोस्।
सुपर हीरो फिर्ता छन्। तयार एक मोटरबाइक दौड लागि, प्रत्येक अन्य विरुद्ध कुनै एक सुपर नायक र जाति चयन र पहिलो स्थानमा दौड जित्न र नयाँ स्तर अनलक प्राप्त गर्नुहोस्। आनन्द लिनुहोस्!
avengers skrull निष्कासन
यो Avengers को Skrull Homeworld गर्न लडाई लिन भेला। तिनीहरूले Skrulls र आफ्नो रानी पराजित गर्न सक्छौं? यो रमाइलो शूटिंग खेल प्ले Avengers कार्टून श्रृंखला र रेट्रो पिक्सेल शैली ग्राफिक्स देखि वर्ण संग।
फलाम मानिस पृथ्वीमा रक्षा
फलाम मानिससित space.You पृथ्वीमा सुरक्षा गर्न विरुद्ध फलाम मानिस नियन्त्रण गर्न आफ्नो कौशल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ tasked छ Avengers टोलीमा एक विशेष चरित्र, यो समय पृथ्वीको Asgardian Loki.Iron मानिसको एक सेनाले आक्रमण भइरहेको को खतरा छ शत्रु।
फलाम मानिस अन्तिम उडान परीक्षण
टोनी बिल्कुलै villainous रोबोट को चीनी सेना देखि शहर सुरक्षित गर्न आफ्नो फलाम मानिस सुट डन पर्छ। त्यसपछि उहाँले मन्डारिन गर्न लडाई लाग्न सक्छ!
फलाम मानिस उडान परीक्षण
, हावा को माध्यम ले फ्लाई खराब मान्छे सबै तल गोली, र शक्ति बृद्धि सङ्कलन।
फलाम मानिस उड सिक्न
फलाम मानिस नयाँ हतियार संग उड गर्न सिक्न, उसलाई मदत ...
फलाम मानिस युद्धमा शहर
फलाम मानिस शहर जोगाउन सबै शत्रु रोबोट हराउन मद्दत गर्नुहोस्। नियन्त्रण गर्न र शत्रु गोली माउस प्रयोग गर्नुहोस्। रमाइलो गर।
Avengers Hawkeye र काला विधवा एक गोप्य हाइड्रा आधार घुसपैठ र यसलाई तल लिन पर्छ!
फलाम मानिस Armored न्याय
दुष्ट drones लड्न र यो नयाँ फलाम मानिस खेल न्याय सेवा गर्न मन्डारिन पराजित!
फलाम मानिस खोज
यो सुन्दर फलाम मानिस छविमा लुकेका संख्या सबै पाउन
शक्ति रेंजरों सुपर megaforce पैतृक 2
शक्ति Rangers फर्किए! आफ्नो मनपर्ने वर्ण चयन र आफ्नो अद्भुत कौशल बन्द पृथ्वी र यसको inhabitants.Show खतरामा कि दुष्ट को शक्तिशाली सेना विरुद्ध लड्न र झगडा लागि तयार!
ELSA पेट भाइरस
राजकुमारी ELSA उनको पेट मा एक भयानक पीडा छ। उनको पेट भित्र छन् कि ब्याक्टेरिया हटाउन सबै प्रक्रियाहरु गरेर राजकुमारी मद्दत गर्नुहोस्। एक पटक र लागि ELSA गरेको पेट दुखाइ सबै समाप्त गर्ने अधिकार क्रममा कदम पालना गर्नुहोस्।
तपाईं तर हेलिकप्टर सावधान रहनुहोस् हुन सक्छ सकेसम्म धेरै सिक्का सङ्कलन। यो रोमाञ्चक साहसिक7स्तर मार्फत उड।
एक काल्पनिक कमाण्डरफाइल खेल मा तिमी मानिसहरूले एक निडर जनरल, Orcs, Elves, Dwarves रूपमा आफूलाई प्रयास गर्न सक्छ! सात खम्बा पुरातन महादेशमा भन्दा कसले हावी हुनेछ? आफ्नो निडर सेना सिर्जना र युद्धमा गरौं
खराब रोबोट लडाइँ!
खाने रक्षक खेल
यो श्री Krabs नवीनतम धन्यवाद नुस्खा रक्षा गर्न Spongebob र गैरी सम्म छ - टर्की Patty!